ဆက်သွယ်ရေးစခန်းAnundgårdချမှတ် – လွန်ရာစုနှစ်အပေါ်ကိုပြန်ရှာနေ | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 16 ဖေဖေါ်ဝါရီလ, 2017 အားဖြင့် Holmbygden.se
Anund Manor တည်ဆဲတယ်လီဖုန်းလဲလှယ်
ဆက်သွယ်ရေးစခန်းAnundgårdယခု "နေ့စွဲမတိုင်မီအကောင်းဆုံး" ရှိပါတယ်. တိုင်းပြည်အနှံ့ကြေးနီကွန်ယက်ကိုထွက် phasing ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယခု Telia ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. အဆိုပါပိတ်သိမ်းတယ်လီဖုန်းပေါက်မှတဆင့်နေအိမ်တယ်လီဖုန်း subscriptions ကိုရှိသောသူအပေါင်းတို့ subscriber များအားအကျိုးသက်ရောက်, Telia ရှိမရှိသို့မဟုတ်အခြားအော်ပရေတာ.
နှစ်ပေါင်း 2012 က Telia လိုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် Loviken အတွက်တယ်လီဖုန်းဘူတာရုံကိုဆင်းထား. အခုတော့ဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံထို့နောက်၎င်း၏အကောင်းဆုံးရက်ပေါင်းမမြင်စဖူးရသောဈAnundgårdဖြစ်ပါသည်. အဟောင်းကိုကြေးနီကွန်ရက်မှတဆင့်ထက်ဆက်သွယ်ရေးအခြားရွေးချယ်စရာကျော်ကပို-and ပိုပြီးယူထားပြီးသကဲ့သို့မရှိတော့အမြတ်အစွန်းစဉ်းစားသမျှသောအဟောင်းကိုတယ်လီဖုန်းဖလှယ်မှုဖျက်သိမ်းရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ယခုတချို့နှစ်ပေါင်းများအတွက် Telia Group မှကိုစောင့်ရှောက်. Anundgårdအဆိုပါဘူတာရုံကောငျးကြိုးအတှကျပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည် 2018-04-03.
အသစ်သောရွေးချယ်မှုများ, Holmes Fiber အပါအဝင်
သငျသညျသိမ်းထားချင်ကြောင်းလက်ရှိကြေးနီကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်အိမ်ဖုန်းရှိသူတို့အဘို့အထူးထူးအပြားပြား options များဖြစ်ကြသည်. သင် "Holmes Fiber" မှတဆင့်ဖိုင်ဘာ installed ရသွားနေတယ်ဆိုရင် (Obs! အစီရင်ခံစာ ဒီမှာ!) ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်အော်ပရေတာထဲကသုံးနိုငျအတွက်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Servanet (ကြောင်းအတူတကွ Holmes Fiber အတူဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ကြမည်).
ဖိုက်ဘာကျော်ကအိမ်မှာတယ်လီဖုန်းရှိခြင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ, က “မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်နေအိမ်တယ်လီဖုန်း”. ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်, Telia လက်တွင် allmän information med frågor och svar reference ပိတ်သိမ်း ("အနာဂတ်ကွန်ယက်") နှင့် sina egna erbjudanden သငျသညျနေဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင် (သို့မဟုတ် sign up ကို) Telia.
မဟုတ်ရင်, Telekområdgivarna သငျသညျ subscriptions ကိုဝယ်ယူရန်မတိုင်မီအမှုအရာမှထွက် sort ဖို့နဲ့သငျသညျစဉ်းစားသင့်သောအရာကိုကိုကူညီနိုင်မယ့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော-ကြားနေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု.
Anund လယ်ယာပထမဦးဆုံးတယ်လီဖုန်းလဲလှယ်ဒီအဆောက်အဦ၌ရှိ၏, အခြို့သောနှစ်ပေါင်းရာကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသျော.
ကွယ်လွန်သူ 1910 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ဈAnundgårdပထမလက်စွဲစာအုပ်တယ်လီဖုန်းလဲလှယ်. အဆိုပါဘူတာရုံပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းလဲလှယ်၏အရှေ့ဘက် 50 ခဲ့သည် (အသင်းတော်၏တည်ရှိ 700m အရှေ့). Stationsbeteckningen အချိန်တွင် "Östbyn" ခဲ့, ကိုယ့်Anundgårdဒါ့အပြင် fixed ဘူတာရုံအနိမ့်. အဆိုပါ "ကို manual ပြောင်းကုန်ပြီ" Holmes ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်များကအကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်, မာရီယာ "Maja" Hjerpe (Viklund မွေးဖွား, 1912).
လှည့်ပတ် 1920 တယ်လီဖုန်း Holmes က၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၌ရှိ၏သောအခါ,, က switch ကိုသူ Maja ရဲ့မွေးစားဖခင် Pelle Haglund ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ပြီးသား 13 နှစ်သမီးအရွယ်ကပြေးကျော်ယူခဲ့ရတယ်တဲ့သူ Maia ခဲ့သည်. သူမသည်ပထမဦးဆုံးအလိုအလျှောက်ဘူတာရုံသည်အထိ Holmes အတွက်လက်စွဲဂီယာအပြောင်းအလဲများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကို ယူ. ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့်ပိုမိုခေတ်မီတယ်လီဖုန်း devices များ Holmes ရဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းယူ, 60 ရဲ့အလယ်၌.
တစ်ဦးလဲလှယ်ဘူတာရုံ၏ပုံဥပမာ 40 St subscriber များအားဤအချိန်တွင်ကြည့်ရှု. အဆိုပါ Manor မှတူညီ, Anund ပထမဦးဆုံးဂီယာကြည့်ရှု.
သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုမခေါ်ချင်ခဲ့တယ်အခါသင်ပထမဦးဆုံးဖုန်းကို cranking start နှင့်ဟန်းဆက်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမပြုမီ. ကတည်းကအခြားအဆုံးမှာ Maja "Anundgård" replied ပြီးတော့မှာချိတ်ဆက်ခံရဖို့ကိုမေးခဲ့. ဒါကြောင့်လည်းဒီအလုပ်ကနေတဆင့်ရွာတခုတခုအပေါ်မှာရံဖန်ရံခါအတင်းအဖျင်းသောစကားကိုနားထောင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်.
ပုံ t.v. နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့ Maja ရဲ့အလုပ်အကိုင်စာချုပ်များ၏တဦးတည်းကိုတှေ့မွငျ, "အများပြည်သူနှင့်ကြေးနန်းလေ့လာရေးခရီးမှခေါ်ဆိုမှုစက်ကိရိယာနှင့်ဖလှယ်ဘူတာရုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်းစာချုပ်" မှ 1935. အဲဒီမှာဘူတာရုံပွင့်လင်းsöckendagarပါလိမ့်မယ်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အ (ရက်) တွင် 8-20. သင်တစ်စုံတစ်ဦးကကိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများရှာခဲ့သူတွေကိုနာရီအပြင်ဘက်တွင်. တနင်္ဂနွေတွင်, ဘူတာရုံမှာနံနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည် 10-13 မှာတနင်္ဂနွေညစာများအတွက် 16-18. ထို့အပွငျ, သင်ဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်များအတွက်လုပ်ခ 40 SEK / တနှစ်နှင့် subscriptions ကိုခဲ့တာအောက်ကပုံရိပ်တွေမြင်နိုင်ပါသည်. ထိုအစာရင်းသွင်းသူ၏နံပါတ်အတိုင်း "တယ်လီဖုန်း" သည်နှင့်အညီ 1935 အဖြစ် 15 St, အရာရှားပါးတစ်ဦးသည်လစဉ်လစာဖြစ်လိမ့်မည် 50 Kr.
သင်တယ်လီဖုန်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း switching ရုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုသည် သွား. ဒါအိမ်မှာတယ်လီဖုန်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသောသူတို့အဘို့. လမ်းကိုထွက်တွင်သင်သည်ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ခဲ့ 15 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံပေါ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အနက်ရောင်သေနတ်အတွက်တစ်ပြားမှ. အလားတူရုပ်ပုံလွှာလည်းနှစ်ပေါင်းရက်စွဲပါဆွီဒင်ရဲ့ဘူတာရုံမှတ်တမ်းများအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ရှုမြင် 1919. စာမျက်နှာပေါ်တွင် 120 "Östbyn" ကျနော်တို့ကိုရှာဖွေ.
Maja ပထမဦးဆုံးတယ်လီဖုန်းရုံးဘဝတှငျနထေိုငျ. 40 ရာစုအကုန်မှာအရှေ့တစ်အသစ်များလက်စွဲစာအုပ် switchboard 100 built. ယနေ့အသက်အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံတှငျနထေိုငျသူမြားသူမ၏သမီးဖြစ်ပါတယ်, သူမ၏သားဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးတှငျနထေိုငျစဉ်.
Anund Manor ဒုတိယ switching စင်တာ. ညာဘက်ပြတင်းပေါက်နောက်ကွယ်ကကို manual ဂီယာခဲ့သည်, သငျသညျအိမ်မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းခဲ့လျှင်ကျန်ကြွင်းအခန်းကိုသင်မခေါ်နိုင်
နှစ်လယ်ပိုင်း 60 ခုနှစ်တွင် Holmes ရဲ့ပထမဆုံးအော်တိုတယ်လီဖုန်းလဲလှယ် built ခဲ့ကြသည် (အဆိုပါအဆောက်အဦမရှိတော့ပါ), အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့နှစ်ခုအကြား၌ဤအချိန်. 80 ရဲ့အစောပိုင်းများတွင်ယနေ့ချိန်အထိအသုံးပြုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့. 90 ရဲ့နှစ်လယ်ပိုင်း / နှောင်းပိုင်း, YouTube ကိုမပြုမီရှည်လျားသော, Facebook နှင့် Google ကလငျးကိုမွငျ, အများအပြား Holmbor အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ခဲ့အဖြစ်ကတယ်လီဖုန်းဘူတာရုံမှတဆင့်ခဲ့.
အများစုမှာမကြာခဏ desktop ကွန်ပျူတာတစ်ဦးတညျဆောကျခဲ့ “56 kbits-modem” အရာအလှည့်တစ်ဦးကိုဖုန်းပေါက်သို့ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်. ထိုအခါက Web page များအတွက်ငါးမိနစ်ထိုင်လျက်နှင့်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းထို့နောက်ဖုန်းကိုကောက်ယူသောကျေးဇူးတော်တက် loaded နိုင်! ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပထမဦးဆုံး e-mail, Anund လယ်ယာ switching အလယ်ဗဟိုလွန်?
ကံမကောင်းစွာ Holmes နေထိုင်သူများအဘို့, ဒါအများကြီးပိုမြန်နှင့်အတူအဆင့်မြှင့်ခံရဖို့ဘူတာရုံတယ်ဘယ်တော့မှ ADSL-tekniken 00 ရဲ့အစောပိုင်းအတွင်းဖြန့်ချိ, Telia သို့မဟုတ်အခြားအော်ပရေတာမကကျိုးနပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသောအခါ. ဆောင်းဉီးရာသီ 2005 Anundgårdကျောင်းကိုဆလိုက်ရာမှတစ်ဦးသည်ပိုက်ဆန်လျှော်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပူးပေါင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါလျှင်လည်းAnundgårdsborဟုမေးခဲ့သည်, အရာတွေအကြောင်း 15 အိမ်ထောင်စုလုပ်ခဲ့တယ်. တချို့ကနှစ်ကြာပြီးနောက်ပင်မိုဘိုင်း 3G နည်းပညာ, အရာလူအများစုဖုန်းကိုပေါက်မှတဆင့်၎င်းတို့၏ဟောင်း dial-up တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုစွန့်ပစ်ဆိုလို.
ပြီးနောက်နီးပါး 40 ဝန်ဆောင်မှု၏နှစ်ပေါင်းဆက်လက်အနားပေးခံရဖို့လယ်ယာမကြာသေးခင်ကတယ်လီဖုန်းဘူတာရုံ Anund ပါလိမ့်မယ်
ယနေ့မည်သူမဆိုနောက်ဆုံးတယ်လီဖုန်းပေါက်မှတဆင့်တစ်ဦး "56 kbits modem" နဲ့ surfed ကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လိမ့်မယ်, လက်ရှိအခြေအနေအတွက်န်းကျင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း 40 Anundgårdဘူတာရုံအားဖြင့်အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းများအတွက်တယ်လီဖုန်းပေါက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ subscribers.
ဒီဇင်ဘာလ၌ဆုံးဖြတ်ချက်များ 2016: Holmes ဖို့ဖိုင်ဘာအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့အကူအညီ! Holmbygden.se
Holmes Fiber စီးပွားရေးဇုန်အစည်းအရုံး. ဤနေရာတွင်မှတ်ပုံတင်မယ်!
ပိတ်ပစ် / "အနာဂတ်ကွန်ယက်ကို" အကြောင်းကိုပိုမို Read. Telia.se
4Holmbygden သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, G-မာစတာ! Holmbygden.se
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အပြောင်းအလဲများ- နှင့် Broadband ကွန်ရက်များ, တိုင် & တယ်လီကွန်းအေဂျင်စီ
Telia Loviken အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့တယ်လီဖုန်းကိုဖယ်ရှား 2012, Holmbygden.se